နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: ညီနေမင်း (နည်းပညာ): iphone jail break လုပ်နည်း
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): iphone jail break လုပ်နည်း
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): iphone jail break လုပ်နည်း:
iphone jail break လုပ်နည်းစာအုပ်ကလေးပါ . နောက်ထပ် အသေးစိတ်ကို ကျွန်တော် ရေးပြီးတော့ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် .လတ်တလော တော့ မေးထား တဲ့ ကြွေးလေးတွေကို အရင်ဦးဆုံးဖြေပေးလိုက်ပါဦးမယ် . သူများလုပ်ထား တာလေးတွေကို တင်ပေးနေရတော့ အားတော့နာပါတယ် . ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်လဲပါပါတယ် . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ .
Posted by P Kyaw Swa at 3:41 AM